Al-shabaab oo xukun ku fulisay Nin geystay fal aad u xun oo ka dhacay… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-shabaab oo xukun ku fulisay Nin geystay fal aad u xun oo ka dhacay…
Dagaalayaasha Al-shabaab ayaa goob fagaare ah oo ku taalla degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduug waxaa ay xukun karbaash ah ku fuliyeen Nin la sheegay inuu fal kufsi ah u geystay Gabar kamid ah dadka deegaanka degmadaas.
Al-shabaab ayaa boqolaal dadweyne isugu keenay goobta uu xukunka karbaashka ka dhacaayay, si ay u daawadan, waxaana xukunkaas lagu fuliyay Nin lagu magacaabo Mowliid Cali Warsame oo kufsaday Gabar lagu magacaabo Khadro Farxaan.
Sidoo kale Mowliid ayaa lagu dhuftay 100 karbaash oo ah xukunkii lagu riday , isla markaana waxaa Ninkaas laga qaaday 22 neef Ari, sidoo kalena muddo sanada ah laga masaafuriyo deegaanka uu kufsiga ka geystay.
Al-shabaab ayaa horey sidaan oo kale rag geystay falal kala duwan ku fulisay xukuno isugu jiray dil toogasho iyo mi karbaash ah, waxaana sidoo kalena Al-shabaab ay xukuno ku fulisay rag kale oo lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen dowladda Soomaaliya iyo dowlado kale oo reer galbeed ah.
Madaxweynaha Puntland oo Maanta shir ka furay Magaalada Garoowe
Madaxweynaha Somaliland oo kulan gaar ah la yeeshay Safiirka Denmark